ငါးဖယ်မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ငဖယ်ကိုဒါမျိုးလေးတွေလုပ်စားကြည့်ကြရ အောင်… – Trend.com.mm
Posted on April 7, 2019 April 5, 2019 by Shun Lei Phyo
ငါးဖယ်မကြိုက်တဲ့သူေ တွ အများစုရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပင်မဲ့ ဟင်းချက်ထားတာ တစ်မျိုးထဲ စားမိတာနဲ့ပဲ မကြိုက်ဘူးတန်းမငြင်းလိုက်ပါနဲ့ နော်။ ငါးဖယ်မကြိုက်ဖူးဆိုတဲ့ သူတွေအ တွက် ငါးဖယ်ကိုအဆန်းအပြား လေးတွေချက်စားလို့ရတယ်ဆိုတာ ဝေမျှ ပေးသွားမယ် နော်….
(၁) ငါးဖယ် အစာသွပ်
ငါးဖယ်အစာသွပ်ကို တော့ေ တ်ာတော်များများစားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ ငါးဖယ်သေး လေးေ တွကို အလယ်ကခွဲပြီး ကြက်သွန် ကြော်ဆီချက်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း ငံပြာရည် ဂေါ်ဖီ၊ နံနံပင်ေ တွထည့်ပြီးတစ်ခုလုံးပါးစပ်ထဲ ထည့်စားရာမျိုးပါ။ ငါးဖယ်ဟင်းမကြိုက်ရင်တောင် ဒါေ လးေ တာ့ကြိုက်ကြတယ်မလား။
(၂) ငါးဖယ်ငါးပေါင်း ကြော်
ငါးဖယ် ကို စီးပိုင် နေ အောင်ထောင်းပြီး ဂျုံမှုန့်ရယ်ကြက်ဥရယ်၊ အရသာများရယ် ၊ မဆာ၊ မုန့်ညှင်းရွက်တို့ကို ထည့်ပြီး ရောနယ်ပါ။ ပြီးရင် အ နေ တော်လုံးရယ်လုံး ပြားရင်ပြားပြီး ဆီပူပူ ထဲ ထည့် ကြော်ပါ။ အရမ်းကိုစား ကောင်းတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ငါးဖယ်ကိုရိုးရိုးကြီးချက်ရင်စားရတာ မကြိုက်တတ်ကြတဲ့သူ တွေအတွက်ငါးဖယ်ထဲကို ဒိန်ချဉ်အနည်းငယ်ေ ရာနယ်ပြီးမှချက်ကြည့်ပါ။ နူးညွံ့ပြီးလတ်ဆက်တဲ့ ငါးဖယ်ဒိန်ချဉ်ချက်အရသာကို ခံစားရမှာပါ။
ငါးဖယ်လေးတွေကို ကြက်သားမှုန့်၊ ကြက်သွန်မြိတ်နဲ့ တစ်ခြားကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့အစာပလာထည့်ပြီးနယ်ပါ။ ပြီးရင် တော့ ဖက်ထုတ်ထုတ်တဲ့ အဖက်နဲ့ထုတ်ပြီး ကြော်စားပါ။ ပူပူ လေးစား လေးအရသာ ကောင်း လေပါပဲ။
ငါးဖယျမကွိုကျတဲ့သူေ တှ အမြားစုရှိတတျကွပါတယျ။ ဒါပငျမဲ့ ဟငျးခကျြထားတာ တဈမြိုးထဲ စားမိတာနဲ့ပဲ မကွိုကျဘူးတနျးမငွငျးလိုကျပါနဲ့ နျော။ ငါးဖယျမကွိုကျဖူးဆိုတဲ့ သူတှေအ တှကျ ငါးဖယျကိုအဆနျးအပွား လေးတှေခကျြစားလို့ရတယျဆိုတာ ဝမြှေ ပေးသှားမယျ နျော….(၁) ငါးဖယျ အစာသှပျငါးဖယျအစာသှပျကို တော့ေ တျာတျောမြားမြားစားဖူးမယျထငျပါတယျ။ ငါးဖယျသေး လေးေ တှကို အလယျကခှဲပွီး ကွကျသှနျ ကွျောဆီခကျြ၊ ငရုတျသီးစိမျး ငံပွာရညျ ဂျေါဖီ၊ နံနံပငျေ တှထညျ့ပွီးတဈခုလုံးပါးစပျထဲ ထညျ့စားရာမြိုးပါ။ ငါးဖယျဟငျးမကျွိုကျရငျတောငျ ဒါေ လးေ တာ့ကွိုကျကွတယျမလား။(၂) ငါးဖယျငါးပေါငျး ကွျောငါးဖယျ ကို စီးပိုငျ နေ အောငျထောငျးပွီး ဂြုံမှုနျ့ရယျကွကျဥရယျ၊ အရသာမြားရယျ ၊ မဆာ၊ မုနျ့ညှငျးရှကျတို့ကို ထညျ့ပွီး ရောနယျပါ။ ပွီးရငျ အ နေ တျောလုံးရယျလုံး ပွားရငျပွားပွီး ဆီပူပူ ထဲ ထညျ့ ကွျောပါ။ အရမျးကိုစား ကောငျးတာ တှေ့ရပါလိမျ့မယျ။(၃) ငါးဖယျဒိနျခဉျြခကျြငါးဖယျကိုရိုးရိုးကွီးခကျြရငျစားရတာ မကွိုကျတတျကွတဲ့သူ တှေအတှကျငါးဖယျထဲကို ဒိနျခဉျြအနညျးငယျေ ရာနယျပွီးမှခကျြကွညျ့ပါ။ နူးညှံ့ပွီးလတျဆကျတဲ့ ငါးဖယျဒိနျခဉျြခကျြအရသာကို ခံစားရမှာပါ။(၄) ငါးဖယျဖကျထုတျကွျောငါးဖယျလေးတှေကို ကွကျသားမှုနျ့၊ ကွကျသှနျမွိတျနဲ့ တဈခွားကိုယျထညျ့ခငျြတဲ့အစာပလာထညျ့ပွီးနယျပါ။ ပွီးရငျ တော့ ဖကျထုတျထုတျတဲ့ အဖကျနဲ့ထုတျပွီး ကွျောစားပါ။ ပူပူ လေးစား လေးအရသာ ကောငျး လပေါပဲ။